आणविक बम बनाएर भारतलाई टक्कर दिने पाकिस्तानी वैज्ञानिकको निधन
पाकिस्तानका चर्चित आणविक वैज्ञानिक डा. अब्दुल कदिर खानको निधन भएको छ । आइतबार ८५ वर्षको उमेरमा खानको निधन भएको पाकिस्तानी समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।
आइतवार, अशोज २४, २०७८ ३:४५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। पाकिस्तानका चर्चित आणविक वैज्ञानिक डा. अब्दुल कदिर खानको निधन भएको छ । आइतबार ८५ वर्षको उमेरमा खानको निधन भएको पाकिस्तानी समाचार माध्यमले जनाएका छन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
इस्लामावादस्थित एक अस्पतालमा खानको निधन भएको हो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति डा. अरिफ अलभीले खानको निधनबाट आफू निकै मर्माहत भएको बताएका छन् । खानको योगदान सँधै स्मरण गरिने पनि अलभीले बताए । ‘उहाँले राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्ने आणविक हतियार विकास गर्नमा सघाउनु भयो र उहाँको सेवाप्रति हामी सँधै आभार हुनेछौं’, अलभीले भने ।
सन् १९३६ मा भारतको भोपालमा जन्मिएका खान विभाजनपछि पाकिस्तान गएका थिए । उनलाई पाकिस्तानको आणविक कार्यक्रममा पिता समेत मानिन्छ । भारतले आणविक परीक्षण गरेपछि उनकै सहयोगमा पाकिस्तानले आणविक कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
भारतले सन् १९७४ मा गरेको ‘स्माइलिङ बुद्ध’ नामक आणविक परीक्षण गरेलगत्तै पाकिस्तानले समेत आणविक बम बनाउनु पर्ने भन्दै खानले आवाज उठाएका थिए । सन् १९७६ मा पाकिस्तानको आणविक बम कार्यक्रममा सामेल भएका उनको महत्वपूर्ण योगदानपछि पाकिस्तानले सफलतापूर्वक आणविक परीक्षण गरेको थियो ।
लामो अनुसन्धान र प्रयोगपछि पाकिस्तानले १९९८ मा पहिलो पटक ‘चागाइ-१’ नामक आणविक परीक्षण गरेको हो । भारतले दोस्रो पटक ‘पोखरन-२’ आणविक परीक्षण गरेपछि जवाफस्वरुप पाकिस्तानले उक्त परीक्षण गरेको हो।